News - Horumar u gaar ah dhakhtarka ilkaha ee berrito
Safarka Kiiska cadayga
Horumar ku saabsan ilkaha berri
Ilkaha waxay ku koraan iyada oo loo marayo geeddi-socod adag oo unugyada jilicsan, oo leh unugyo isku xiran, neerfayaasha iyo xididdada dhiigga, ay ku xiran yihiin saddex nooc oo unugyo adag oo kala duwan oo qayb ka mid ah jirka shaqeynaya. Tusaale ahaan sharraxaad u ah geeddi-socodkan, saynisyahannadu waxay inta badan isticmaalaan galka jiirka, kaas oo si joogto ah u kora, lana cusbooneysiiyaa nolosha xayawaanka oo dhan.
In kasta oo xaqiiqda ah in goosashada jiirka inta badan lagu bartay xaalad horumarineed, su'aalo badan oo aasaasi ah oo ku saabsan unugyada ilkaha ee kala duwan, unugyada asliga ah iyo kala duwanaanshahooda iyo firfircoonida gacanta ayaa weli jawaab u baahan.
Iyadoo la adeegsanayo hal unug oo isku xigxigta RNA iyo raad raaca hidaha, cilmi baarayaal ka tirsan Karolinska Institutet, Jaamacada Caafimaadka ee Vienna ee Austria iyo Harvard University ee USA ayaa hada aqoonsaday oo ku sifoobay dhamaan unugyada ilkaha jiirka iyo dhalinta yar ee koraya iyo kuwa waaweyn .
"Laga soo bilaabo unugyada jir-dhiska illaa unugyada qaangaarka ee gabi ahaanba la kala gartay waxaan awoodnay inaan kala saarno dariiqooyinka kala-soocida ee odontoblasts, oo keena ilkaha - unugyada adag ee ugu dhow saxarka - iyo ameloblasts, oo keena dhaldhalaalka," ayaa lagu yiri daraasadda qoraaga Igor Adameyko oo ka tirsan waaxda Physiology iyo Farmashiyada, Karolinska Institutet, iyo wadajirka Kaj Fried oo ka tirsan Waaxda Neuroscience, Karolinska Institutet. "Waxaan sidoo kale ogaanay noocyo cusub oo unugyo ah iyo unugyo unugyada ilkaha ah oo qayb ka ciyaari kara dareenka ilkaha."
Qaar ka mid ah waxyaabaha la helay ayaa sidoo kale sharxi kara dhinacyada qaarkood ee murugsan ee habka difaaca jirka ee ilkaha, qaar kalena waxay iftiiminayaan iftiin cusub oo ku saabsan samayska dhaldhalaalka ilkaha, unugyada ugu adag jidhkeenna.
“Waxaan rajeyneynaa oo aan aaminsanahay in shaqadeena ay aasaas u noqon karto habab cusub oo loo maro dhakhtarka ilkaha ee berrito. Gaar ahaan, waxay dedejin kartaa qaybta dhakhsaha badan ee ilkaha ee dib-u-cusbooneysiinta, daaweynta dabiiciga ah ee lagu beddelayo unugyada dhaawacmay ama lumay.
Natiijooyinka waxaa laga dhigay mid guud ahaan la heli karo oo ah qaab la isku dhex-raadin karo oo is-dhexgal ah oo loo adeegsado istiraatiijiyadda jiirka iyo ilkaha aadanaha. Cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin inay tahay inay cadeeyaan kheyraad waxtar u leh oo keliya cilmi-baarayaasha ilkaha laakiin sidoo kale cilmi-baarayaasha xiiseynaya horumarka iyo bayoolajiga guud ahaan.
Qalabka ay bixiso Karolinska Institutet. Fiiro gaar ah: Mawduuca waxaa loo habeyn karaa qaabka iyo dhererka.
Waqtiga boostada: Oct-12-2020
Cadayga korontada ee Sonic
No.301 Wanxiang Road, Furniture Park, Wanquan Industry Base, Pingyang County, Wenzhou City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha